မီဒီယာ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ > မဂ္ဂဇင်းကိုဆက်ခံ 2016-02 > ပင်တေကုတ္တေ
ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့အတွက်တရားဒေသနာအတွက်ခေါင်းစဉ်များစွာရှိသည်။ ဘုရားသခင်သည်လူတို့တွင်နေထိုင်သည်၊ ဘုရားသခင်က ၀ ိညာဉ်ရေးစည်းလုံးမှုကိုပေးသည်၊ ဘုရားသခင်သည်ဝိသေသလက္ခဏာသစ်ကိုပေးသည်၊ ဘုရားသခင်သည်ကျွန်ုပ်တို့၏တရားတော်များကိုကျွန်ုပ်တို့၏နှလုံးသား၌ရေးသည်၊ ဘုရားသခင်သည်လူများကိုသူကိုယ်တိုင်နှင့်အခြားသူများနှင့်ပြန်လည်သင့်မြတ်စေသည်။ ယခုနှစ်ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့အတွက်ပြင်ဆင်ခြင်းနှင့် ပတ်သက်၍ ကျွန်ုပ်တွေးမိသောအကြောင်းအရာတစ်ခုမှာသခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ပြီးနောက်ကောင်းကင်သို့တက်ကြွပြီးနောက်သန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်လုပ်ဆောင်မည့်အရာအပေါ်အခြေခံသည်။
သခင်ယေရှုထမြောက်ပြီးနောက်ဆယ်ရက်အကြာတွင်ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင်ဓမ္မသစ်ဘုရားရှိခိုးကျောင်းကိုဖွားမြင်ခြင်းအကြောင်းကိုဖတ်ရသောအခါဤဥပမာ၏ကောင်းသောပုံကိုကျွန်ုပ်တို့တွေ့ရသည်။ ယေရှုကတပည့်တော်များအားဤနေ့ကိုစောင့်ဆိုင်းရန်နှင့်ထိုနေ့တွင်ဖြစ်ပျက်မည့်အရာကိုစောင့်ဆိုင်းရန်မိန့်မှာခဲ့သည်။ „Und als er mit ihnen zusammen war, befahl er ihnen, Jerusalem nicht zu verlassen, sondern zu warten auf die Verheissung des Vaters, die ihr, so sprach er, von mir gehört habt“ (Apostelgeschichte 1,4).
ဂျူးတို့၏အတွေးအမြင်အရမကြာသေးမီရက်များသည်မေရှိယနှင့်ဘုရားသခင့်နိုင်ငံတော်ပေါ်ထွန်းခြင်းနှင့်ပတ်သက်သောဓမ္မဟောင်းကျမ်းများစွာနှင့်ဆက်စပ်နေသည်။ ဒါကြောင့်ပေတရုကခေတ်သစ်တစ်ခုထွက်လာပြီလို့ပြောတယ်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်၎င်းကိုကျေးဇူးတော်နှင့်အမှန်တရား၏အချိန်ကာလ၊ ချာ့ချ်ခေတ်သို့မဟုတ် ၀ ိညာဉ်တော်၏ပnewိညာဉ်တရားသစ်၏အချိန်ဟုခေါ်ဆိုသည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲ နေ့မှစ၍ သခင်ယေရှုရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းနှင့်ရှင်ပြန်ထမြောက်ခြင်းအပြီးတွင်ဘုရားသခင်သည်ဤလောက၌နည်းလမ်းသစ်ဖြင့်လုပ်ဆောင်နေသည်။ ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့သည်ယနေ့ကျွန်ုပ်တို့အားဤအမှန်တရားကိုသတိရနေဆဲဖြစ်သည်။ ကျွန်ုပ်တို့သည်ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့ကိုဘုရားသခင်နှင့်ပaိညာဉ်ဖွဲ့ရန်ပွဲတော်ကဲ့သို့မကျင်းပပါ။ ထိုနေ့ရက်သည်ငါတို့အတွက်ဘုရားသခင်လုပ်ပေးသောအရာသည်ဂုဏ်ပြုခြင်းသည်ချာ့ချ်ထုံးတမ်းစဉ်လာအရမဟုတ်ဘဲကျွန်ုပ်တို့၏ဂိုဏ်းဂဏသာမကအခြားသူများလည်းဖြစ်သည်။
ပင်တေကုတ္တေပွဲနေ့တွင်ပိုမိုနက်ရှိုင်းသောသန့်ရှင်းသောဝိညာဉ်တော်သည်အသစ်ပြုပြင်ခြင်း၊ ပြောင်းလဲခြင်းနှင့်ကျွန်ုပ်တို့အားသူ၏တပည့်များဖြစ်လာရန်ပြင်ဆင်ပေးသောနောက်ဆုံးသောနေ့ရက်များတွင်ဘုရားသခင်၏ရွေးနှုတ်ခြင်းလုပ်ရပ်များကိုကျင်းပကြသည်။ ခမည်းတော်နှင့်သားတော်၊ သန့်ရှင်းသော ၀ ိညာဉ်တော်၏ဂုဏ်အသရေနှင့်ယှဉ်သောdisciplesဝံဂေလိတရားကိုဟောပြောခြင်းအကျင့်အားဖြင့်၎င်း၊ Johannes Chrysostomos မှကိုးကားချက်မှတ်မိပါသည်။ Chrysostomos ဆိုသည်မှာ“ ရွှေပါးစပ်” ဟုအဓိပ္ပါယ်ရသောဂရိစကားလုံးဖြစ်သည်။ ဤအမည်ပြောင်သည်သူ၏အံ့ဖွယ်ကောင်းသောဟောပြောခြင်းနည်းလမ်းမှဆင်းသက်လာသည်။
Er sagte: „Unser ganzes Leben ist ein Fest. Als Paulus sagte „Darum lasst uns das Fest feiern“ (1. ကောရိန္သု 5,7f.), meinte er nicht das Passahfest oder Pfingsten. Er sagte, dass jede Zeit ein Fest für Christen ist... Denn, welches Gute hat sich nicht schon zugetragen? Der Sohn Gottes wurde für Sie zum Mensch. Er befreite Sie vom Tod und rief Sie zu einem Königreich. Haben Sie nicht gute Dinge erhalten – und erhalten sie noch immer? Sie können nichts anderes tun, als ihr ganzes Leben lang ein Fest feiern. Lassen Sie niemanden wegen Armut, Krankheit oder Feindschaften niedergeschlagen sein. Es ist ein Fest, alles – ihr ganzes Leben lang!“.